Result Day : आइक्यानले डिसेम्बरमा लिएको सिएको परिक्षाको नतिजा आज प्रकाशित गर्ने !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » Result Day : आइक्यानले डिसेम्बरमा लिएको सिएको परिक्षाको नतिजा आज प्रकाशित गर्ने !
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले गत डिसेम्बरमा लिएको परिक्षाको नतिजा आज प्रकाशन गर्ने भएको छ । आइक्यानले क्याप वान, क्याप टु, क्याप थ्री र सिए सदस्यता परीक्षाको नतिजा आज प्रकाशन गर्न लागेको हो ।
आइक्यान स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार परीक्षाको नतिजा आज बेलुकातिर आउनेछ । परिक्षाको नतिजा प्रकाशनको लगभग तयारी सकिएकाले आज नतिजा प्रकाशन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त नतिजा आइक्यानको अफिसियल वेव साइटमा प्रकाशन हुनेछ ।